[Review] Top 5 Loại Tampon nào tốt an toàn nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 5 Loại Tampon nào tốt an toàn nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Ayini ama-tampons? Yiziphi izinzuzo ezivelele zeTampon? Ukukhetha ukuthenga i-tampon enhle kufanele kusekelwe kuziphi izimo? Futhi kukhona izinhlobo I-tampon Iyiphi ehamba phambili, edume kakhulu namuhla? Joyina Ukubuyekezwa kwe-Phong ukuthola izimpendulo zemibuzo engenhla esihlokweni esingezansi!
1 Ayini ama-tampons?
2 Inzuzo enkulu yeTampon
2.1 Nikeza umsebenzisi umuzwa wokunethezeka
2.2 Ukuhlanzeka okungcono kwesitho sangasese sowesifazane
2.4 Alikho iphunga elibi
3 Imibandela yokukhetha i-Tampon engcono kakhulu
3.1 Khetha i-tampon engusayizi ofanele wesitho sakho sangasese
3.2 Khetha imikhiqizo ye-Tampon ene-absorbency esekelwe kumthamo wegazi lokuya esikhathini
3.3 Khetha ukuthenga imikhiqizo ye-Tampon esebenziseka kalula
4 Izinhlobo ezi-5 ezihamba phambili zeTampon namuhla zithandwa ngabesifazane
4.1 1. I-Silvercare I-2 yehla i-tampon ye-organic ene-lever
4.2 2. I-Kotex Tampon evamile yaseMelika
4.3 3. I-Tampon Sofy Soft
4.4 4. Tampon uHelen Harper
4.5 5. I-Tampon OB 64C usayizi Ojwayelekile
5 Ungayisebenzisa kanjani futhi uqaphele lapho usebenzisa iTampon
I-tampon empeleni kuwuhlobo lwe-napkin ye-sanitary futhi inomklamo okhethekile kakhulu futhi ohlangene. Ngokuvamile izinti ze-Tampon zincane njengesihloko somunwe futhi zifakwa phakathi ngqo esithweni sangasese ukuze zimunce ukuya esikhathini ngokushesha.
Ikakhulukazi ekupheleni komkhiqizo, kuzoba nentambo ende eyengeziwe ukuze udale indawo yokubamba, ukuze abasebenzisi bakwazi ukukhipha i-Tampon kalula. Ungakwazi ukuhambisa kalula futhi ulawule i-swab yekotini ngomthofu ngesikhathi sokusebenzisa.
Inzuzo enkulu yeTampon
I-tampon iwumkhiqizo othandwa kakhulu futhi owethenjwayo kwabesifazane ngoba uletha izinzuzo ezinkulu kanje:
Nikeza umsebenzisi umuzwa wokunethezeka
I-Tampon inikeza abasebenzisi ukunethezeka okwengeziwe kunokusebenzisa amathoni. Ukusetshenziswa njalo kwama-tampons kuzovumela abesifazane ukuba bahlanganyele emisebenzini engokwenyama njengokubhukuda, ezemidlalo, njll, ngaphandle kokukhathazeka ngokuthi bayawa noma baguquguquke.
Ukuhlanzeka okungcono kwesitho sangasese sowesifazane
Abaningi besifazane banomuzwa wokuthi usebenzisa tampons abenze bazizwe behlanzekile isitho sabo sangasese. Azisabalali noma zibangele iphunga elibi njengama-tampons.
I-tampon ingabonakala ngokucacile ngebhulukwe lakho elibangela izimo ezinamahloni. Ngama-tampons, ngeke usakhathazeka ngalokhu ngoba asuke efakwe ngaphakathi ngaphakathi esithweni sangasese, ngakho ngeke kube nenkinga uma usufuna ukufaka izingubo.
Alikho iphunga elibi
Njengoba wazi, lapho igazi lokuya esikhathini lihlangana nomoya, libangela iphunga elibi. I-Tampon izokusiza ukuqeda le nkinga ngokuphelele.
Usayizi we-tampon mncane futhi ungafakwa kalula ephaketheni futhi uzungezwe. Kulula ukuzifaka ekujuleni kwesitho sangasese sowesifazane futhi zenze ukubamba i-tampon kube lula futhi.
Imibandela yokukhetha i-Tampon engcono kakhulu
Ukuze uthole umuzwa okhululekile uma usebenzisa, udinga ukwazi ukuthi ungayikhetha kanjani i-Tampon efanele. Nazi izindlela ezimbalwa ezibalulekile lapho uthenga i-Tampon okudingeka uzinake:
Khetha i-tampon engusayizi ofanele wesitho sakho sangasese
Ama-tampons emakethe namuhla avame ukukhiqizwa ngamasayizi ama-3 ahlukene: amancane – aphakathi – amakhulu. Uma ungakaze usebenzise i-tampon, kufanele ukhethe usayizi omncane ukuze uyifake kalula esithweni sangasese.
Uma usujwayele, ungasebenzisa imikhiqizo enamasayizi amakhulu, kodwa ungakhethi nhlobo i-Tampon enkulu kakhulu, lokhu kuzokubangela ubuhlungu ngenkathi uyisebenzisa.
Khetha imikhiqizo ye-Tampon ene-absorbency esekelwe kumthamo wegazi lokuya esikhathini
Ngaphezu kokuhlukaniswa I-tampon Ngokusho kosayizi, imikhiqizo ibuye ihlukaniswe ngokusho kwe-absorbency. Phakathi kwazo, kukhona ama-tampons ane-absorbency ephakathi, ukumuncwa okuhle nokumunca kakhulu …
Ngokuya ngenani legazi elifihliwe phakathi nesikhathi sakho, kufanele ukhethe umugqa womkhiqizo one-absorbency efanelekile. Uma inani lokuphuma kokuya esikhathini lilinganiselwe, kufanele ukhethe i-tampon ene-absorbency enhle. Kodwa uma inani lokopha kokuya esikhathini likhulu kakhulu, manje kufanele usebenzise i-tampon emunca kakhulu!
Khetha ukuthenga imikhiqizo ye-Tampon esebenziseka kalula
Ngaphandle kwama-push-button tampons, kukhona ama-push-free tampons. Ngokubona kwami, kufanele ukhethe ukuthenga ama-tampon anezinduku zokusunduza ukuze asetshenziswe kalula. Ngoba lapho-ke uzoba ne-fulcrum engcono yokuphusha kalula umkhiqizo ujule ngaphakathi kwesitho sangasese sowesifazane noma uwukhiphe ngempumelelo.
Izinhlobo ezi-5 ezihamba phambili zeTampon namuhla zithandwa ngabesifazane
Kunezinhlobo eziningi ezahlukene zama-tampons emakethe namuhla, ahluka ngemikhiqizo, imiklamo, nosayizi. Ukuze ungangabazi lapho ukhetha ukuthenga i-Tampon, Ukubuyekezwa kwe-Phong kuzoklelisa izinhlobo ezi-5 eziphezulu I-tampon Okuhamba phambili kwanamuhla, okuthandwa ngabesifazane imi kanje:
1. I-Silvercare I-2 yehla i-tampon ye-organic ene-lever
I-Silvercare Regular ingumkhiqizo I-tampon ngama-push rods akhiqizwa ngqo eSpain. Umkhiqizo okwamanje uthola uthando nokwethenjwa okukhulu phakathi kwabesifazane esikhathini samanje.
Ukugqama komkhiqizo kubonakala ekupakishweni nasekuklanyweni komkhiqizo ngezingxenye ezi-3 ezikahle: induku yokusunduza efana nesirinji, umgogodla omuncayo owenziwe ngo-100% ukotini kanye nengxenye.Intambo yomsila omude, efika ku-10cm.
Futhi yini eyenza abesifazane bathande lo mkhiqizo ukuthi unezithako eziphephile, awuqukethe amakhemikhali, izithako ezisebenzayo i-Glyphosate nePlastiki. Uma isetshenziswa ayibangeli ukucasuka kwesikhumba kodwa ifaneleka ngokuphelele kubasebenzisi abanesikhumba esibucayi. Ikakhulukazi, ikhono lokubola linamandla, ngakho-ke linobungane kakhulu endaweni ezungezile.
Ngaphandle kwalokho, i-Silvercare Regular futhi iletha ukusetshenziswa okuhle ukusiza abesifazane bahlale bekhululekile futhi beqiniseka ngezinsuku zokukhanya okubomvu ngenxa yekhono layo lokumunca ukuya esikhathini ngokushesha okukhulu. Ngakho-ke, uma ufuna ukuba ngumnikazi we-Tampon engcono kakhulu, akufanele uzibe lo mugqa womkhiqizo.
Intengo yesithenjwa: 140,000 VND.
2. I-Kotex Tampon evamile yaseMelika
I-Kotex ingumkhiqizo I-tampon yakhelwe ukuhlangabezana namazinga ekhwalithi futhi yakhiwe ngokusekelwe kubuchwepheshe besimanje base-US. Lokhu kuthathwa njengokukhetha okuphelele kwabasebenzisi uma befuna ukuba ngabanikazi bomkhiqizo we-Tampon ongcono kakhulu.
Umkhiqizo uhlukaniswa ngokuklama kwawo okuhlangene, oklanywe ngesigaba samafutha amancane kanye ne-push rod ehambisanayo, ngakho-ke kulula kakhulu kwabesifazane ngesikhathi sokusetshenziswa.
I-Tampon Kotex ihlangabezana ngokugcwele nezidingo zabasebenzisi ngenxa yokumuncwa kwayo ngokushesha futhi iwusizo kakhulu ngoba umgogodla wokumunca wenziwe ngo-100% ukotini wokwenziwa. Futhi ngaphezu kwakho konke, ayinawo amakhemikhali e-chlorine ne-polyester bleaching, ngakho-ke iphephe kakhulu futhi inobungani bemvelo.
Ngaphezu kwalokho, nezinye izinzuzo eziningi ezifana nesikhathi eside sokusetshenziswa, okuhlala amahora angu-6 ngaphandle kokubangela ukuchichima. Ngenxa yendlela yesimanje yokunqanda ukuchitheka kwegazi ehlanganiswe nekhwalithi yomkhiqizo eqinisekisiwe, umkhiqizo usuphenduke ulayini weTampon owusizo nobaluleke kakhulu emakethe.
Intengo yesithenjwa: 149,000 VND.
3. I-Tampon Sofy Soft
Phezulu kwemikhiqizo ehamba phambili ye-Tampon, I-Tampon Sofy Soft hlala uletha ikhwalithi ephezulu kakhulu kubasebenzisi abanomklamo oyingqayizivele, okulula ukuwusebenzisa. Umkhiqizo ukhiqizwa ngokuvumelana nobuchwepheshe besimanje baseJapane futhi uklanywe ngokuvumelana nezindinganiso zaseYurophu, ngakho-ke usuwumkhiqizo othenjwayo futhi okhethwe umhlaba wonke.
Idizayini ye-Tampon Sofy Soft iphephe kakhulu, ukwakhiwa okujwayelekile okunomnyombo wekotini wekhwalithi ephezulu ohlinzeka ngokuzwakala okuthambile kanye nokumunca okuhle kakhulu. Ngaphandle kwalokho, nge-push rod elula yomkhiqizo, abasebenzisi bangafaka i-tampon ekujuleni kwesitho sangasese sowesifazane kalula.
Ikakhulukazi, uma ukusebenzisa eminye imikhiqizo kwenza abesifazane badideke ekukhetheni. I-Dill esebenzisa i-Tampon Sofy Soft izokusiza ngokuphelele ukuthi uthole umuzwa wokuzethemba, obushelelezi futhi owomile uma uyisebenzisa.
Intengo yesithenjwa: 139,000 VND.
4. Tampon uHelen Harper
Tampon uHelen Harper iwumugqa womkhiqizo wama-napkin wase-Japanese we-napkin onikeza abasebenzisi umuzwa onethezeke kakhulu futhi onethezekile uma kuziwa esikhathini esingakhululekile sokuya esikhathini. Umkhiqizo ukhiqizwa ngokusekelwe kubuchwepheshe besimanje baseYurophu, ngakho ukwakheka kwale tampon kuphephe kakhulu, akomile, kodwa kuthambile kakhulu, ukuze kungene kahle kakhulu.
Isici esikhethekile esenza lo mugqa womkhiqizo we-tampon udume kakhulu emakethe yaseVietnam ukuthi unomklamo ofanele isitho sangasese sowesifazane. Futhi iza nesilinganiso esikahle sokusunduza ukusiza ukubeka i-tampon endaweni efanele, ngakho izobasekela kangcono labo abayisebenzisa izikhathi eziningi.
Futhi ukuze kuhlangatshezwane nesidingo esikhulu sabasebenzisi, lo mugqa we-Tampon unezinhlobo eziningi ezahlukene ukuze amakhasimende akhethe kuzo ngentengo enengqondo ngokuphelele. Ngakho-ke, uma ubheke ukuzwa i-tampon yase-Japan, ithenge manje ukuze wenze usuku lokukhanya okubomvu olucasulayo lube lula futhi lube mnene!
Intengo yesithenjwa: 180,000 VND.
5. I-Tampon OB 64C usayizi Ojwayelekile
I-Tampon OB 64C Usayizi Ojwayelekile umugqa womkhiqizo I-tampon ivela eJalimane, ngakho ukuphelela kwalo mkhiqizo kuboniswa ngokucacile ngosayizi wawo ohlangene, ohlanganiswe ngephakheji elula kodwa esezingeni eliphezulu kakhulu. Ikakhulukazi idizayini elula enezingxenye ezi-3, ukuhambisana kahle nesitho sangasese sowesifazane ngaphandle kokubangela into yokulunywa noma ukunyakaza ngesikhathi sokusetshenziswa.
Ingxenye eyinhloko ye-suction core nayo yenziwe 100% ukotini ukuze inikeze ukumuncwa okusheshayo nokuphephile. Umkhiqizo awusebenzisi amakhemikhali ayingozi, ngakho-ke waziswa kakhulu abesifazane ngekhwalithi nokuphepha komkhiqizo. Ngaphandle kwalokho, iphuzu elenza umkhiqizo waziwe ngenxa yomklamo onezinhlobo eziningi ezahlukene, okunikeza abasebenzisi ukukhetha okuhlukahlukene.
Lena futhi i-tampon edumile yaseJalimane emise okotshani enomshini osebenza njengokhokho odonsa ngamandla, onciphisa ukuchichima okusebenzayo.
Ungayisebenzisa kanjani futhi uqaphele lapho usebenzisa iTampon
Kuze kube manje, ama-tampons akhiqizwa ngezinhlobo eziningi ezahlukene nosayizi. Lezo izinhlobo ezi-2: I-tampon ukwanda ngobude noma banzi shaft futhi tampons ukwanda ububanzi noma ukunwetshwa radially. Yomibili le mikhiqizo inokusetshenziswa okufanayo:
Isinyathelo 1: Geza izandla zakho kahle ngaphambi kokusebenzisa ama-tampons ukuze uqinisekise ukuphepha nenhlanzeko. Ngesikhathi esifanayo, udinga ukugcina isitho sakho sangasese sihlanzekile ukuze uvimbele ukutheleleka.
Isinyathelo sesi-2: Ulungiselela nge-squatting position endlini yangasese noma ungakwazi ukuma uqonde futhi welule imilenze yakho emaceleni.
Isinyathelo sesi-3: Bamba induku yeTamponi ngokuqinile ngokwemiyalelo ephrintwe ebhokisini. Bese usebenzisa isithupha sakho nomunwe ophakathi nendawo ukuze ulungise ukuhlangana phakathi kwamashubhu amakhulu namancane e-tampon. Okulandelayo, sebenzisa umunwe wakho wenkomba ukuze uwubeke phezu kweshubhu elincane endaweni lapho ucingo oluyinhloko lukhona.
Isinyathelo sesi-4: Sebenzisa omunye umunwe wakho ukuze welule udebe olukhulu lwangaphandle. Okulandelayo, phusha i-tampon kancane kancane ungene esithweni sangasese ukuya phezulu ngamadigri ayi-15. Qhubeka uphushe uze uzwe ukuthintwa phakathi kwesandla sakho nesikhumba ngaphakathi kwesitho sangasese sowesifazane.
Isinyathelo sesi-5: Sebenzisa isandla sakho ukuphusha ishubhu le-tampon esithweni sangasese sowesifazane. Phusha kuze kube yilapho lonke ishubhu selilungile endaweni yangasese, bese umisa.
Isinyathelo sesi-6: Abesifazane basebenzisa iminwe ukulungisa amapayipi amancane namakhulu. Okulandelayo, susa womabili amashubhu endaweni yakho yangasese. Phakathi nale nqubo, uzobona intambo ye-tampon ilenga ngaphandle nje kwentombazane.
Isinyathelo sesi-7: Ngemva kwesikhathi esithile, faka i-tampon ngaphakathi kwesisu ukuze ubambe igazi lokuya esikhathini, ungakwazi ukususa umkhiqizo endaweni yangasese. Ukuze wenze lokhu, udinga ukubamba intambo bese uyikhipha kancane. Cishe uzozizwa ukhuhla kancane esikhumbeni sakho, kodwa ngeke uzwe ubuhlungu.
Amanothi lapho usebenzisa i-Tampon okudingeka ukwazi:
Udinga ukuhlanza isitho sangasese sowesifazane ngaphambi kokusebenzisa amathoni ukuze ugweme ukubangela izifo
Ngemuva kokubhukuda, shintsha ngokushesha i-Tampon
Nakanjani ungasebenzisi izinti zeTamponi ezi-2 ngesikhathi esisodwa
Faka i-tampon ngqo ngokwemiyalelo esephaketheni ukuze ugweme ukulimaza isitho sangasese sowesifazane.
Ungasebenzisi ama-tampons anephunga elimnandi.
Isihloko esingenhla yizinhlobo ezi-5 eziphezulu i-tampon enhle ethandwa kakhulu phakathi kwabesifazane emakethe namuhla. Ngethemba, ngalesi sihloko, uzokwazi ukukukhethela umkhiqizo we-tampon ofanele. Ngesikhathi esifanayo, bamba ukuthi ungasebenzisa kanjani i-tampon ngempumelelo kakhulu!
Xem Thêm [Review] Top 5 Nước uống collagen loại nào tốt nhất hiện nay | Muasalebang